Ukuphepha kolwazi | I-Google iyigcina kanjani idatha yakho iphephile
Ukuphepha kwakho kuza kuqala kuyo yonke into esiyenzayo.
Uma ngabe idatha yakho ingavikelekile, ayifihlekile. Ingakho siqinisekisa ukuthi amasevisi e-Google afana nosesho, amamephu, ne-YouTube kuvikelwe ngokuphepha okuthuthukile komhlaba.
Ukubethela kugcina idatha yakho iyimfihlo ngenkathi ihamba
Ukubethela kuletha ileveli ephezulu yokuphepha nobumfihlo kumasevisi ethu. Kungani wenza izinto ezifana nokuthumela i-imeyili, ukwabelana ngeviiyo, ukuvakashela iwebhusayithi, noma ukugcina izithombe zakho, idatha oyidalayo ihamba phakathi kwamadivayisi akho, amasevisi e-Google, nokuphakathi kwedatha. Sivikela le datha ngezifanekiso eziningi zokuphepha, kufaka phakathi ubuchwepheshe bokubethela njenge-HTTPS ne-Transport Layer Security.
Ingqalasizinda yethu yamafu ivikela idatha yakho 24/7
Kusuka kokumaphakathi kwedatha yokudizayina kuya ekuboneni amakhebuli ahambisa idatha phakathi kwamazwe, i-Google isebenza isebenzisa enye yezingqalasizinda zamafuthi zomhlaba eziphephile futhi ezethembekayo. Futhi ihlolwa njalo ukuvikela idatha yakho nokuyenza itholakale uma uyidinga. Eqinisweni, sisabalalisa idatha kuzikhungo eziningi zedatha, ngakho-ke kusimo lapho kuba khona umlilo noma inhlekelele, ingamikiswa kalula nangokungabi nenkinga ezindaweni ezizinzile neziphephile.
Ukutholakala kokucindezelayo kusiza ukuvikela amasevisi ethu
Singamela ngokuqhubekayo amasevisi ethu nezingqalasizinda eziyisisekelo ukuzivikela kokucindezelayo, kufaka phakathi ugaxekile, uhlelo olungayilungele ikhompyutha, amagciwane, nezinye izinhlobo zekhodi engalungile.
Asiniki ohulumeni ukufinyelela okuqondile kudatha yakho
Asinike ukufinyelela “okuyimfihlo” kudatha yakho noma amaseva ethu alondoloza idatha yakho, kuphelela lapho. Lokho kusho ukuthi alikho ibhizinisi likahulumeni, i-U.S. noma ngenye indlela, elinokufinyelela okuqondile kulwazi lwabasebenzisi bethu. Kunezikhathi uma sithola izicelo zedatha yomsebenzisi kusuka kubasebenzeli bomthetho. Ithimba lethu lezomthetho libuyekeza lezo zicelo, liphinde libuyisele emuva uma ngabe isicelo sibanzi ngaphezulu noma singalandeli inqubo elungile. Sisebenze kanzima ukuthi sivume ngalezi zicelo zedatha kumbiko wokungenamfihlo.
Ukuphepha kwakhelwe ngaphakathi kwawo wonke amasevisi ethu
Kusuka kuzibuyekezo ezizenzakalelayo kuya kokuvimbela ogaxekile, amasevisi e-Google adizayinwe ngokuphepha maphakathi.
Ukubethela kwe-Gmail kugcina ama-imeyili ayimfihlo
Ukuvikela kogaxekile kwe-Gmail kuhlunga ama-imeyili asolisayo
I-Chrome ibuyekeza ngokuzenzakalela ukuphepha kwesiphequluli sakho
I-Google Play igcina izinhlelo zokusebenza eziyingozi ukuthi zingangeni efonini yakho
I-Google ivimbela izikhangiso ezingalungile nezilahlekisayo
Kusuka ngosuku lokuqala, i-Gmail isekele uxhumo lokubethela, okwenza kubenzima ukuthi abantu abangalungile bafunde okuthumelayo. I-Gmail futhi ikuxwayisa mayelana nobungozi bokuphepha obungenzeka, njengokuthi uma uthola i-imeyili eyayingathunyelwe ngoxhumo olubethelwe.
Iningi lokuhlaselwa kohlelo olungayilungele ikhompuyutha kanye nobugebengu bokweba imininingwane ebucayi kuqala nge-imeyili. Ukuvikela kwe-Gmail kukuvikela kusukela kugaxekile, ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi, nohlelo olungayilungele ikhompuyutha kangcono kunenye isevisi ye-imeyili. I-Gmail ihlaziya amaphethini adwetshwe kusuka kuzigidigidi zemilayezo ukukhomba izakhiwo zama-imeyili lezo abasebenzisi abazimaka njengogaxekile, bese isebenzise labo bomaki ukuvimbela ama-imeyili asolisayo nayingozi uma akufinyelela. Ungasiza ngokukhetha okuthi "Bika ugaxekile" kuma-imeyili asolisayo owatholayo.
Ukufunda komshini nokuhlakanipha okwenziwe kusiza isihlungi sogaxekile se-Gmail ukuthola okuningi okuqondile. Manje igcina u-99.9% wogaxekile ukuthi unganeni kubhokisi lakho lokungenayo.
Ubuchwepheshe bokuphepha njalo buyashintsha, ngakho-ke ukuhlala uphephile kusho ukuhlala usesikhathini samanje. Ingakho i-Chrome ihlola njalo ukuqinisekisa ukuthi inguqulo yesiphequluli oyisebenzisayo ibuyekezwe ngokulungisa kwakamuva, ukuvikela ezinhlelweni ezingayilungele ikhompyutha namasayithi alahlekisayo, nokuningi. I-Chrome ibuyekeza ngokuzenzakalelayo, ukuze ube nokuvikela kobuchwepheshe bokuphepha be-Chrome obukuvikele.
Obunye bebungozi obukhulu bokuphepha bedivayisi yakho kungaba izinhlelo zokusebenza ozifakile. Isitimu yethu yokuthola imaka izinhlelo zokusebenza eziyingozi ngaphambi kokufinyelela ku-Google Play Isitolo. Uma singenaiqinisekiso ukuthi ingabe uhlelo lokusebenza luphephile, libuyekezwa ngokwenza amalungu ethimba lokuphepha le-Android. Njengoba sihlunga isistimu yethu yokuthola, sihlola kabusha izinhlelo zokusebenza esezivele ziku-Google Play futhi sisuze lezo ezingaba yingozi ukuze zingagcini zikudivayisi yakho.
Umuzwa wakho we-inthanethi ungamoshwa izikhangiso eziphethe uhlelo olungayilungele ikhompyutha, zimboze okuqukethwe ozama ukukubona, zithuthukise impahla engelona iqiniso, noma zephule izinqubomgomo zethu zokukhangisa. Sithathela le nkinga phezulu. Njalo ngonyaka inhlanganisela yethu yeyizuyekezo ezibukhoma namasofthiwe amahle avimbela cishe izigidigidi zezikhangiso ezingalungile. Futhi sikunika amathuluzi okubika izikhangiso ezihlaselayo nokulawula ukuthi iziphi izinhlobo zezikhangiso ozibonayo. Sishicilela imininingwane yethu nokwenza okuhle ukusiza ukwenza i-inthanethi ephephile kuwo wonke umuntu.
Amathiphu aphezulu ukukusiza ukuthi uhlale uphephile ku-inthanethi
Gcina ama-akhawunti akho aku-inthanethi nedatha yakho kuvikelekile ngalawa mathiphu asheshayo.
Qinisa ukungena kwakho ngemvume
Dala amaphasiwedi aqinile
Sebenzisa amaphasiwedi ahlukile kuyo yonke i-akhawunti
Landela amaphasiwedi amaningi
Vikela izigebengu ngokuqinisekiswa okuyizinyathelo ezimbili
Vikela amadivayisi akho
Gcina isofthiwe yakho isesikhathini samanje
Sebenzisa ukukhiya isikrini
Khiyela ifoni yakho uma ikulahlekela
Gcina izinhlelo zokusebenza eziyingozi zingekho efonini yakho
Gwema imizamo yobugebengu bokweba imininingwane ebucayi
Njalo qinisekisa ama-URL asolisayo noma izixhumanisi
Qaphela imikhonyovu ye-imeyili, izintengo ezingamanga, nezipho
Qaphela izicelo zolwazi lomuntu siqu
Bheka abantu abazenza okungebona
Hlola amafayela ngaphambi kokulanda
Phequlula i-inthanethi ngokuphephile
Sebenzisa amanethiwekhi aphephile
Bheka ukuxhumea okuphephile ngaphambi kokunaka ulwazi oluzwelayo
Ukudala iphasiwedi eqinile, evikelekile kuyisinyathelo esibalulekile ongasithatha ekuvikeleni ama-akhawunti akho ku-inthanethi. Ungenza lokhu ngokusebenzisa uchungechunge lwamagama ongeke uwakhohlwe, kodwa anzima ukuqageleka. Noma thatha umusho omude bese wakhe iphasiwedi ngezinhlamvu zokuqala zegama ngalinye. Ukuze uyeze iqine kakhudlwana, yenze okungenani izinhlamvu ezingu-8 ubude, ngoba uma iphasiwedi yakho iyinde, iyaqina.
Uma ucelwa ukudala izimpendulo zemibuzo yokuphepha, naka ukusebenzisa izimpendulo ezingelona iqiniso ukuze kube nzima ukuthi aqageleke.
Ukusebenzisa iphasiwedi eyodwa ukungena kuma-akhawunti amaningi, njenge-akhawunti yakho ye-Google, amaphrofayela emidiya yomphakathi, namawebhusayithi okuthengisa, kukhulisa ubungozi bakho bokuphepha. Kufana nokuye owodwa wokukhiya ikhaya lakho, imoto nehhovisi – uma othile athola ukufinyelela kweyodwa, konke kungangena engozini.
Umphathi wephasiwedi, njenge-Google Smart Lock kusiphequluli se-Chrome, ikusiza ukuthi ugade futhi ulandele onke amaphasiwedi wama-akhawunti akho ahlukahlukene aku-inthanethi. Futhi ingalandela izimpendulo zakho kuya emibuzweni yokuvikela, futhi idale amaphasiwedi angahleliwe kuwe.
Ukuqinisekiswa okuyizinyathelo ezimbili kusiza ukugcina noma ubani ongafanele athole ukufinyelela ku-akhawunti yakho ngokucela ukuthi usebenzisa into yesibili phezu kwegama lakho lomsebenzisi nephasiwedi ukungena ngemvume ku-akhawunti yakho. Nge-Google, isibonelo, lokhu kungaba ikhodi enamadijithi ayisithupha eyenziwe kusuka kuhlelo lokusebenza lesiqinisekisi le-Google ukwamukela ukungena ngemvume kusuka kudivayisi ethembekile.
Ngokuvikela okuthuthukile ebugebengwini bokweba imininingwane ebucayi, ungasebenzisa ukhiye wokuvikela ongenisa embobeni ye-USB yekhompyutha yakho noma exhuma kudivayisi yakho yeselula isebenzisa i-NFC (Near Field Communication) noma i-Bluetooth.
Ukuze uzivikele kusukela ekubeni sengozini yokuvikelwa, hlala usebenzisa isofthiwe esesikhathini kusiphequluli sakho sewebhu, isistimu yokusebenza, ama-plugin, noma kuzihleli zedokhumenti. Uma uthola isaziso sokubuyekeza isothiwe yakho, yenza kanjalo ngokushesha.
Buyekeza isofthiwe oyisebenzisa njalo ukuze uqinisekise ukuthi uhlala isebenzisa izinguqulo zakamuva. Amanye amasevisi, kufaka isiphequluli se-Chrome, azozibuyekeza wona ngokuzenzakalela.
Uma ungasebenzisi ikhompyutha yakho, ikhompyutha ephathekayo, ithebhulethi, noma ifoni, khiya isikrini sakho ukuze ugcine abanye ukuthi bangangeni kudivayisi yakho. Ngokuphepha okungeziwe, setha idivayisi yakho ukuthi ikhiye ngokuzenzakalela uma ilala.
Esimweni lapho ifoni yakho ilahleka noma itshonthswa, vakashela ku-My Account bese ukhethe okuthi “Thola ifoni yami” ukuze uvikele idatha yakho ngezinyathelo ezisheshayo ezimbalwa. Noma ngabe unedivayisi ye-Android noma ye-iOS, ungayibheka ngokuzenzakalelayo futhi ukhiye ifoni yakho ukuze kungabi nomuntu ongakwazi ukuyisebenzisa futhi afinyelele ulwazi lwakho lomuntu siqu.
Njalo landa izinhlelo zakho zokusebenza zeselula kusuka kumthombo owethembayo. Ukuze usize ukugcina amadivayisi e-Android aphephile, i-Google Play Protect isebenzisa ukuhlola kokuphepha kuzinhlelo zokusebenza kusuka ku-Google Play Isitolo ngaphambi kokuzilanda, nokuhlolela njalo idivayisi yakho ngezinhlelo zokusebenza eziyingozi kusuka kweminye imithombo.
Ukuze ugcine idatha yakho ivikelekile:
Buyekeza izinhlelo zakho zokusebenza, futhi ususe lezo ongazisebenzisi
Vakashela izilungiselelo zakho zesitolo zohlelo lokusebenza futhi unike amandla ukubuyekeza ngokuzenzakalela
Nika ukufinyelela kuphela kwidatha ezwelayo, njengendawo yakho nezithombe, kuzinhlelo zokusebenza ozethembayo
Ubugebengu bokweba imininingwane ebucayi kungumzamo wokukukhohlisa ukuthi uveze ulwazi lwakho lomuntu siqu, njengephasiwedi. Kungathatha izindlela eziningi, ngakho-ke kubalulekile ukufunda ukubona ama-imeyili asolisayo namawebhusayithi. Isibonelo, umhlaseli angadala ikhasi lokungena ngemvume elibukeka lilungile, kodwa empeleni akulona langempela, futhi uma iphasiwedi yakho isiveziwe umhlaseli angafinyelela i-akhawunti yakho noma angene emshinini wakho.
Ukuze ugweme ukutshontshelwa imininingwane ebucayi:
Ungachofoza izixhumanisi ezisolisayo
Njalo hlolisisa i-URL ukuqinisekisa ukuthi ufaka idatha yakho kuwebhusayithi elungile noma uhlelo lokusebenza
Imilayezo kusuka ebantwini ongabazi iyasolelwa, ikakhulukazi uma ibonakala imihle kakhulu ukuthi ingaba iqiniso — njengokuthi uwine okuthile, ukunikezela ngezintengo ngokuqedela uhlolo, noma ukuphromotha izindlela zokwenza imali. Ungachofozi izixhumanisi ezisolisayo, futhi ungafaki ulwazi lomuntu siqu kumafomu asolisayo nezinhlolo.
Ungaphenduli kuma-imeyili asolisayo, imilayezo esheshayo, noma amawindi e-pop-up acela ulwazi lwakho oluyimfihlo, njengamaphasiwedi, izinombolo ze-akhawunti noma zekhadi lesikweletu, noma ngisho usuku lakho lokuzalwa. Ngisho noma umlayezo uvela kusayithi olethembayo, njengebhange lakho, ungachofozi kusixhumanisi noma uthumele umlayezo wokuphendula. Kungcono ukuya ngqo kuwebhusayithi yabo noma uhlelo lokusebenza ukungena ngemvume ku-akhawunti yakho.
Khumbula, amasayithi alungile namasevisi ngeke athumele imilayezo ukucela ukuthi uthumele amaphasiwedi noma ulwazi lezimali nge-imeyili.
Uma othile omaziyo akuthumela i-imeyili, kodwa umlayezo awubonakali kahle, i-akhawunti yakhe kungenzeka ukuthi itshontshiwe.
Izicelo ezisheshayo zemali
Umuntu ovimbeleke kwelinye ilizwe
Umuntu othi ifoni yakhe itshontshiwe futhi akakwazi ukushayelwa
Ungaphenduli umlayezo noma uchofoze izixhumanisi ngaphandle kokuthi uqinisekise ukuthi i-imyili ilungile.
Okunye ukuhlasela okuhloniphekile kungavela ngamadokhumenti angenisiwe namadokhumenti e-PDF. Uma uhlangabezane nokunamathiselwe okusolisayo, sebenzisa i-Chrome nomai-Google Drayivu nokwehlisa ubungozi bokungenisa idivayisi yakho. Uma sithola igciwane, sizokubonisa isexwayiso.
Qaphela ngokusebenzisa i-WiFi yomphakathi noma emahhala, ngisho nalawo adinga amaphasiwedi. Uma uxhuma kunethiwekhi yomphakathi, noma ubani okunethiwekhi angakwazi ukuhlola umsebenzi wakho we-inthanethi, njengamawebhusayithi owavakashelayo nolwazi oluthayiphayo kumasayithi. Uma i-WiFi yomphakathi noma emahhala kuyinketho yakho, isiphequluli se-Chrome sizokwazisa kubha lekheli uma isayithi iphephile.
Uma uphequlula iwebhu – ikakhulukazi uma uhlela ukufaka ulwazi oluzwelayo njengephasiwedi noma imininingwane yekhadi lesikweleti – qinisekisa ukuthi uxhumo kumasayithi owavakashelayo luphephile. I-URL ephephile izoqala nge-HTTPS. Isiphequli se-Chrome sizoobonisa isithonjana esiluhlaza, esikhiyiwe enkambini ye-URL futhi ithi, “Kuphephile.” Uma kungaphephile, kuzofundeka kanje “Akuphephile.” I-HTTPS ikusiza ukuthi uphequlule ngokuphephile ngokuxhuma isiphequluli sakho noma uhlelo lokusebenza namawebhusayithi owavakashelayo.
Qinisa ukuvikela kwe-akhawunti yakho ye-Google
Yenza ukuhlolwa kokuvikela ukuze wenze isiqiniseko sokuthi i-akhawunti yakho ye-Google ivikeleke ngendlela okungakhonakala ngayo. Kuthatha kuphela amaminithi ambalwa.